Amadoda Afanele Agqoke Kanjani Kahle - Izeluleko Zamadoda AseSitayeleni | Amadoda aSitayela
Indlela Amadoda Okufanele Agqoke Kahle Ngayo
Indoda ithanda ukugqoka kahle futhi inakekele isithombe sayo. Ukuze uthuthukise kangcono ukunambitheka nobuciko, kufanele ukhethe izindatshana lapho zingakuqondisa khona ukwazi kanjani ukuhlanganisa izingubo nemibala. Ukugqoka kahle ukwazi ukuthi ungazijwayeza kanjani umzuzu nezimo ezithile, njalo ngokunambitheka nobuntu.
Ukuqala ngesitayela esihle, kufanele uhlale ukhumbula njalo indlela yokuphila kanye nebala lomzimba. Umuntu omfishane akafani nomuntu omude, indoda enezinqe ezibanzi noma ezacile kakhulu ... yingakho sizochaza yonke leyo mininingwane lokho kuzosenza senze umehluko.
1 Izingubo eziyisisekelo zekhabethe lakho
2 Ungagqoka kanjani kuye ngomzimba
Izingubo eziyisisekelo zekhabethe lakho
Kuhlale kuwusizo ukuba nekhabethe lakho lezo zingubo eziyisisekelo ezizohlala iminyaka eminingi futhi ezingaba njalo hlanganisa nanoma iyiphi enye ingubo. Kuhle ukubamba ingubo eyisisekelo bese uyihlanganisa nento esefashinini.
AmaCowboys: Zingenye yezingubo ezibalulekile zekhabethe lakho. I-Jeans noma i-jeans idlala indima yabo engcono kakhulu uma ingumthunzi ohlaza okwesibhakabhaka, kungaba ukukhanya noma kumnyama. Zibukeka kahle ngejazi le-blazer, amahembe, ama-t-shirts noma ama-sweaters.
Amabhulukwe kakotini: Kungokunye okubalulekile futhi okusebenza kangcono izitayela zamaShayina. Ukusikwa kwakhe kuyinto yakudala futhi akususelwa kwisitayela sakhe, futhi unemibala eminingi angakhetha kuyo. Vele, uma kukhulunywa ngokuhlala ne- umbala ongathathi hlangothi ngaso sonke isikhathi ukufanisa noma yimuphi omunye umbala, njengomthunzi omnyama noma i-beige.
Ihembe elimhlophe noma elimsulwaUma umqondo ukugqoka kahle ngezikhathi ezithile, ukuba nehembe elimhlophe kuhlale kusebenza. Isebenza kahle kuzo zombili izikhathi ezihlelekile nezingavamile. Uma ungazithandi zimhlophe kangako, ungasebenzisa amahembe womunye umbala wokukhanya, kepha ngaphandle kohlobo lokudweba.
Ingubo yokugqoka: le sethi yejazi nebhulukwe yenza i-joker ephelele, efanelekile yilabo abanemibala eyisisekelo, njenge-gray, emnyama noma eluhlaza okwesibhakabhaka. Ukunqunywa kwebhulukwe kuwine umdlalo we ukulingana okuncane namajakhethi isitayela se-blazer, ngakho ungawagqoka ngolunye uhlobo lwebhulukwe. Ithiphu elilodwa: zama ukuthenga i-suit nge-finite finish, ehlala ibonakala sengathi i-ayina futhi ngendwangu enhle, ngisho noma ikubiza imali encane.
Izicathulo: leli phuzu lingokuthile komuntu siqu. Kukhona amadoda akhetha ukuba nawo izicathulo ezinhle zikanokusho futhi lokho kuhlala iminyaka eminingi. Ngakolunye uhlangothi, sinombono wentsha lapho ikhetha khona i- amateki anethezekile navamile. Ngokuqinisekile ungaphuthelwa ezinye izicathulo ezinhle nezikahle zezemidlalo, ezingahlanganiswa ngendlela enhle nenhle.
Ungagqoka kanjani kuye ngomzimba
Indlela yokugqoka ihambisana nomzimba womuntu, ukuze amadoda amade Kubalulekile ukukala inani lezingubo. Babukeka kahle kakhulu amajakhethi ama-American blazers, izikibha ezinde kanye nawo wonke amaphethini nemidwebo oyifunayo. Amabhulukwe angcono lawo ukulingana okuncane, ziqondise. Izicathulo kufanele zibe nozwane oyindilinga, lezo ezinomumo ocijile azihambisani kahle njengoba zingathuthukisa ubude bonyawo. Ngokufanayo singakwazi ukuguqula isimo esiyindilinga kuwo wonke amateki, amabhuzu nezicathulo zamaqakala.
Amadoda amafushane banamaqhinga abo amancane. Ungabheki amahembe noma izingubo ezixegayo, kepha kunalokho zilingane ngokuphakama kwezinqulu futhi kucishe kuthukuthele. Amabhulukwe kufanele asikwe 'ukulingana okuncane' njengoba izokwelula umlenze futhi ivele ichazwe kakhulu futhi ibe yincane. Amaphrinti nge imithende eqondile yenza isithombe sibe isitayela, ngoba ama-horizontal azokwandisa umzimba. Uma kunokwenzeka, sebenzisa isethi yezingubo zombala ofanayo futhi uma ungagqoka kangcono izicathulo ezicijile.
Amadoda amancanyana Banamaqhinga abo okungaveli njengokuncanyana kakhulu. Izingubo ezigqokwe kakhulu namabhulukwe anezikhwama eziseceleni kubukeka kukuhle kuzo, konke ukunikeza ivolumu ethe xaxa emzimbeni. Ibhulukwe eliqondile zibukeka zizinhle, kepha ukusika kakhulu mncane, uzacile noma uqinile bazenza zibonakale zizacile. Amahembe kufanele abe banzi futhi uma ungafinyezi kakhulu, amade angalunga.
Amadoda angamaChubby Baphinde badinge amaqhinga abo amancane futhi ngalokhu kumele bafune izingubo ngazo ukusikeka okuqondile nokuqondile. Ungathengi izimpahla eziqinile ongakwazi ukuzigqoka emuva kwesikhathi futhi ungangezi izingqimba zezingubo ngokungafani namadoda amancane. Imibala ezizwa ingcono kakhulu yilezo ezihlinzeka ngokungathathi hlangothi: mnyama, mpunga, nsundu, beige, njll. Lezi shades zibukeka kahle futhi zisusa amakhilogremu angeziwe.
Ukuqedela nokungeza imininingwane emincane singakucebisa lokho ungalokothi uthathwe izitayela ezintsha. Zingaba isitayela sakho, kepha izikhathi eziningi akuyona inketho engcono kakhulu futhi singaphutha. Landela isitayela sakho futhi ungathatheki yimfashini njengoba sibuyekezile, yize ingahlala isetshenziswa izingcezu eziguquguqukayo nezikhululekile ukuthi impela bakhethwa ngempumelelo enhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Indlela Amadoda Okufanele Agqoke Kahle Ngayo
Ungazisika kanjani izinwele zomfana
Izinwele zezinwele zesimanje zabafana